Hazard oo fariin u diray taageerayaasha Real Madrid, kaddib imaatinkiisa garoonka Santiago Bernabeu – Gool FM
(Madrid) 15 Juunyo 2019. Laacibka reer Belgian ee Eden Hazard ayaa fariin mahad celin ah u diray jamaahiirta kooxdiisa cusub ee Real Madrid, isagoo dhinaca kale erayo amaan kala dul dhacay macalinkiisa cusub ee Zinedine Zidane.
Real Madrid ayaa khamiistii ugu soo bandhigtay laacibkeeda cusub ee Eden Hazard garoonka Santiago Bernabeu warbaahinta iyo jamaaheerteeda, iyadoo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez.
Eden Hazard ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Real Madrid wuxuu ku sheegay.
“Maaliyada kooxdan micno weyn ayay ii tahay, wey adag tahay inaan erayo ku qeexo dareenkeyga, wax walba ee aan doonayo ayaa ah inaan soo laabto bisha soo aadan isla markaana aan u ciyaaro kooxdan”.
“Waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku wareegaya marka aad hurdada kasoo kacdo ayaa ah inaad tahay ciyaaryahan ka tirsan kooxda Real Madrid, waxaana muhiim ah inaad guulo la gaarto dhamaadka xili ciyaareedka, haddii aan u ciyaarno koox ahaan, rabitaan, dabacsanaan iyo shaqo, waxaan ku guuleysan doonaa wax walba ee aan dooneyno”.
“Xusuusteyda ugu horeysay waxay ahayd goolkii uu Zinedine Zidane ka dhaliyay kooxda Bayer Leverkusen finalkii Champions League”.
“Waxaan bilaabay inaan daawado kubada cagta isaga dartiis, waxaan ku noolaa Belgian, balse waxaan taageeray xulka qaranka ee France isaga dartiis, hadana ugu dambeyntii waan wada shaqeeneynaa, waana dareen gaar ah, waxaan doonayaa inaan gaaro bisha soo socota si aan u bilaabo diyaar garowga xili ciyaareedka cusub”.
Ugu dambeyntii Eden Hazard ayaa wuxuu fariin mahad celin ah u diray taageerayaasha kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Waxaan kaliya doonayaa inaan si balaaran kaga mahad celiyo soo dhaweyntaan, waxaan eheydeen kuwo cajiib ah, waxaana doonayaa in markale aan ku kulano Santiago Bernabeu kulanka ugu horeeya ee horyaalka La Liga ee dalka Spain”.
Virgil van Dijk oo sheegay sida uu wali ugu ooman yahay in guulo badan uu la gaaro kooxda Liverpool